Ogaden News Agency (ONA) – Guddiga Qaxootiga Ogadenya oo barnaamij qiimi badan kaga qaybgalay munaasabadda MQA ee Kenya
Guddiga Qaxootiga Ogadenya oo barnaamij qiimi badan kaga qaybgalay munaasabadda MQA ee Kenya
Posted by ONA Admin	/ June 21, 2013
Munaasabad lagu maamuusayey Maalinta Qaxootiga Aduunka 20 June (World Refugee Day 20th June) ayaa waxaa lagu qabtay Magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya. Munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen qowmiyadaha kala duwan ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa waxaa kamid ahaa bulshooyinkii ka qayb galay munaasabada shacabka Ogaadeeniya. Gudiga Qaxootiga Ogaadeniya ee dalka Kenya ayaa soo diyaariyey barnaamij aad u qiima badan oo ay ugu talagaleen inay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan maalintaan wayn ee loo asteeyey qaxootiga aduunka.
Jaaliyada Ogaadeeniya ee Nairobi ayaa kusoo bandhigtay munaasabada barnaamijyo kala duwan oo ay kamid ahaayeen suugaanta hiddaha iyo dhaqanka u ah bulshada Ogaadeeniya sida Dhaantooyin iyo suugaan kale.
Gudoomiyaha Gudiga Qaxootiga Ogaadeeniya ee Kenya En. Axmed Faarax Maxamuud ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin qiima gaar ah u leh dhammaan qaxootiga aduunka. Isagoo yidhi; “Maanta oo ahayd maalin loo dabaal dagayey maalinta qaxootiga aduunka ayaa waxay Qaramada Midoobay sheegtay in tirada qaxootiga adduunka ay taagan tahay heerkii ugu sarreeyey muddo 18 sano ah tiradaasi oo ah 45 milyan oo qof.”
Geeska Afrikaan waxaa ku sugan qaxooti ka badan 1 milyan oo Soomaali ah. Kuwaasi oo kasoo kala qaxay Soomaaliya iyo Ogaadeeniya qaxootina ku ah Xeryahaya Qaxootiga ee Dhadhaab,oo ah halka ay ku jiraan qaxootiga ugu badan caalamka ee meel keliya ku sugan.
20 June ee maanta loo dabaal dagay ayaa ku soo aadaysa xilli ay xukuumada gumaysiga Ethiopia sii laba jibaartay laynta iyo barakicinta dadka shacabka ah ee Ogaadeeniya iyadoo hay’adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa bini aadan nimadu ay sheegayaan in xaalada ka jirta Ogaadeniya ay tahay mid halis ah una baahan in si deg deg ah wax looga qabto lagulana xisaabtamo xukuumada wayaanaha dhibaatooyinka ay ka gaysatay wadankaasi.
Maxamed C. Yurub